‘अट्रिटिज अनदि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन «
‘अट्रिटिज अनदि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन
प्रकाशित मिति : आश्विन ५, २०७७ सोमबार
पाँचौं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६४६ पृष्ठको ‘अट्रिटिज अनदि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तकको विमोचन गरे । भौतिक दूरी कायम राख्दै सानो समूहको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उक्त पुस्तक विमोचन भएको हो ।
विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नयाँ संविधान नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित भएको तथा यसबारे सबैलाई जानकारी गराउनु जरुरी भएको उल्लेख गरे । यसको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरु सबैको भूमिका आवश्यक छ । यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकको सुरक्षा, विभेद तथा त्रासरहित जीवन, मानवोचित सम्मान, रास्ट्रिय समृद्धि तथा रास्ट्रियताको जगेर्ना हुने उनले स्पष्ट पारे ।
संविधानमा अपूर्णता देखिएमा संशोधन हुनसक्छ । स्थायित्वका नाममा संविधानमा गतिहीनता स्वीकार गरिँदैन । संशोधन परिमार्जन हुनसक्छ । तर, अर्काको प्रभावमा बहकिन नहुने उनको दृष्टिकोण थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले नेपालको नयाँ संविधानको विशेषताहरुको चर्चा गर्दै सम्पूर्ण मुलुकले यसको कार्यान्वयन र संगठनिक विकासलाई जोडदिनु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । यो धेरै विशिष्ट प्रकारको संविधान हो । यसको सफलताका लागि सक्षम तथा फुर्तिलो प्रशासन तथा निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ ।
विमोचित पुस्तकको सम्पादक संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले नेपालको संविधान २०७२ को उचित कार्यान्वयनका लागि यसको व्याख्या र विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएका छन् । उनको भनाइमा “यो संसारको सबैभन्दा नयाँ संविधान हो र यसले दुई–दुई पटकको संविधानसभाका माध्यमबाट व्यक्त भएका जनताको आशा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रकाशित पुस्तक यसकारण पनि विशेष छ कि संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको र संविधान दिवस मनाइरहेको समयमा यो प्रकाशित हुँदैछ । यसले चुनौती तथा सम्भावना दुवैलाई उचित रूपमा विश्लेषण गर्छ ।”
शनिबार विमोचित पुस्तक नयाँ संविधानको विषयमा २०१८ अगस्तमा भएका प्रस्तुतिहरूमा तथा तिनमा गरिएका टिप्पणी तथा व्याख्यामा आधारित रहेको छ । पुस्तकले संविधान जारी भएपछिका पुगनपुग ३ वर्षमा देखिएका कार्यान्वयनका चुनौतिहरुका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्याभण्डारीद्वारा उद्घाटन तथा प्रधानमन्त्री ओलीको समापन मन्तव्य रहेको उक्त सम्मेलन नयाँ संविधानअन्तर्गत तीन चरणका चुनावहरू सम्पन्न भएपछि भएको थियो ।
पुस्तकमा संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरूको समीक्षा, प्रस्तुति तथा छलफलहरूका सांराश तथा २९ लेखकहरूका लेख समावेश छन् । यसरी समावेश भएका लेखमा नेपाल, दक्षिण एसिया तथा अन्य मुलुकका संविधान, न्याय, संविधानवाद, समाज विज्ञान र फरक मुलुकका अनुभवहरूलाई संविधानलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आधार बनाइएको छ । संविधानवादको तुलनात्मक अध्ययनदेखि नयाँ संविधानका महत्वपूर्ण विषयवस्तु र समेटिएको काम तथा समग्रमा, लेखहरूले संविधानको मूल अर्थ र भावना अनुरूप लागू गर्नेतर्फ संकेत गर्छन् ।
अट्रिटिज अनदि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल
सुशासनको कसीमा शासनको विकासक्रम र स्थानीय सरकार
मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ
एक महिनामा सात लाख बाहिरिए
पछिल्लो एक महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाट सात लाख यात्रु बाहिरिएका छन् भने ६ लाख भित्रिएका छन्
साढे चार वर्षमा पनि बनेन भूकम्प स्मृति पार्क
शिलान्यास एकातिर, संरचना निर्माण अन्तैसिन्धुपाल्चोक-शिलान्यास गरिएको डेढ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको
डडेल्धुरा- दसैं तिहार, छठ लगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गए पनि डडेल्धुरा जिल्लाका व्यापारिक बजारमा चहलपहल
८ सय बढी खसी बोका काठमाडौं पठाइँदै
दाङबाट यस वर्ष ८ सय भन्दा बढी खसी बोका काठमाडौ पठाइने भएको छ । खाद्य
भेडाबाख्रा पाल्ने कृषक सरकारी अनुदानबाट बञ्चित
म्याग्दी-लामो सयमदेखि हिमालको काखमा भेडापालन ब्यवसायलाई निरन्तरता दिएका कृषकहरु राज्यको अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् ।